Jamaica Blitz on Global Markets: Fanavaozana ofisialy nataon'ny minisitry ny fizahantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Jamaica Blitz on Global Markets: Fanavaozana ofisialy nataon'ny minisitry ny fizahantany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Cruising • culinary • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • fivoriana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Minisitry ny Fizahantany Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia nanolotra fanavaozam-baovao momba ny sehatry ny fizahantany ho an'ny Parlemanta. Ireto manaraka ireto ny fanamarihany.
Ny indostrian'ny fizahan-tany any Jamaika dia miverina tsikelikely amin'ny fomba lehibe ary ny fangatahana ny vokatra namboarinay dia avo indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Tsy nisy na taiza na taiza niharihary kokoa noho ny tamin'ny tsenam-barotra dimy herinandro nahomby indrindra izay nitondra anay avy any Etazonia sy Kanada ho any Afovoany Atsinanana sy Royaume-Uni.
Niavaka tokoa ny valiny.
Efa miharihary amin'ny isa fa ny fomba fiasa vaovao ataonay amin'ny tolotra fizahan-tany, nateraky ny fiheverana ny valan'aretina COVID-19, dia mahafa-po. Miakatra ny isan'ny fahatongavanay, tsara ny fitaterana an'habakabaka mandritra ny vanim-potoanan'ny ririnina, ary hiverina any amin'ny seranan-tsambo rehetra izahay alohan'ny faran'ny taona.
Mihoatra ny 1.2 tapitrisa ny fahatongavan'ny fiatoana amin'izao fotoana izao, ary hatramin'ny nanombohan'ny fandefasana sambo tamin'ny volana aogositra, dia nandray mpandeha 36,000 mahery izahay, raha toa ka mahatratra 1.5 lavitrisa dolara amerikana izao ny vola azonay.
Jamaika dia eo amin'ny lalana mankany amin'ny fahasitranana. Tombanana ho tafakatra 2021% isan-taona ny fahatongavan'ireo fiatoana tamin'ny taona 41, ary tamin'ny taona 2019 dia naverinay ny antsasaky ny orinasa fiatoana tamin'ny taona XNUMX.
Ny vaovao tsara dia ny volana Desambra matetika no volana matanjaka ho antsika, ary manomboka ny vanim-potoana ambony rehefa miakatra ny sarany, ka azo inoana fa hahatratra ny vinavinay momba ny mpitsidika 1.6 tapitrisa ary mihoatra ny 2 lavitrisa dolara amerikana.
Amin'ny faran'ny taona 2022, vinavinaina ho 3.2 tapitrisa ny isan'ny mpitsidika an'i Jamaika, ka 1.1 tapitrisa ny isan'ny mpandeha an-tongotra ary 2.1 tapitrisa eo ho eo ny fahatongavan'ireo fiatoana, raha toa ka 3.3 lavitrisa dolara ny vola miditra.
Amin'ny faran'ny taona 2023, vinavinaina ho 4.1 tapitrisa ny isan'ny mpitsidika an'i Jamaika, ka mahatratra 1.6 tapitrisa ny isan'ny mpandeha an-tongotra ary 2.5 tapitrisa ny isan'ny mpitsidika ary 4.2 lavitrisa dolara ny vola miditra.
Amin'ny faran'ny taona 2024, vinavinaina hihoatra ny tarehintsika talohan'ny areti-mifindra isika miaraka amin'ny fahatongavan'ny mpitsidika 4.5 tapitrisa ary tombanana ho 4.7 lavitrisa dolara amerikana.
Vaovao tsara hafa momba ny indostria izay maneho mialoha ity fanarenana matanjaka ho an'ny fizahan-tany ity:
Ny 90% amin'ny tetikasa fampiasam-bola mialoha ny areti-mifindra dia mijanona amin'ny toerany.
Tetikasa fampivoarana trano fandraisam-bahiny am-polony mahery no mandeha.
Efitrano fanampiny 5,000.
Fandrosoana manerana ny faritra samihafa manerana ny Nosy.
Famerenana ny asa fitsangantsanganana amin'ny seranan-tsambo rehetra manerana ny nosy amin'ny fiandohan'ny volana Desambra
Mikasika fohy momba ny fandefasana sambo, taorian'ny fiatoana efa ho 20 volana, dia nandray ny sambony voalohany i Falmouth tamin'ny alahady - Emerald Princess an'ny Carnival Corporation, izay misy mpandeha sy mpiasa 2,780 eo ho eo.
Ny Celebrity Equinox, Aida Diva ary Crystal Serenity dia andrasana hiverina any Falmouth amin'ity volana ity. Ny sambon'ny Disney Cruise Lines Disney Fantasy dia nokasaina hitsidika ny volana Desambra.
Ny fahatongavan'ny Emerald Princess dia nanome fahafahana ho an'ny fandefasana malefaka ny Village Artisan ao amin'ny Hampden Wharf miaraka amin'ny mpanao asa tanana 10. Tena noraisin’ireo mpitsidika an-tsambo izany. Ny vohitra ara-bola mitentina 700 tapitrisa dolara (TEF) dia mitantara ny tantaran'i Falmouth ary manome fahafahana ny Jamaikana sy ny mpitsidika hizara sakafo, zava-pisotro, zavakanto, asa tanana ary kolontsaina eo an-toerana.
Tafiditra ao anatin'ny tetikasa fampandrosoana an'i Hampden Wharf midadasika kokoa izy io ary ho voalohany amin'ireo andian-tanànan'ny Artisan izay ho any amin'ny faritra fialan-tsasatra manerana ny nosy.
Ny vokatra mahomby amin'ny tsena iraisam-pirenena blitz dia azo antoka fa hanampy antsika hahatratra io tanjona io raha tsy mihoatra izany.
Mino izany aho fiverenana tsara sy fitomboan'ny fangatahana Brand Jamaica dia noho ny ezaka mahomby ataontsika amin'ny famerenana ny fahatokisan'ny mpandeha ao amin'ny Destination Jamaika.
Ny protocols momba ny fahasalamana sy ny fiarovana, ny Corridors Resilient, ny Jamaica Cares, ary ny tahan'ny vaksiny avo lenta (eo amin'ny 60%) eo amin'ireo mpiasan'ny fizahantany dia manome toky ny mpitsidika anay traikefa fialan-tsasatra azo antoka, azo antoka ary tsy misy olana.
Te-hizara ny sasany amin'ireo vokatra lehibe tamin'ny diako vao haingana aho, miaraka amin'ireo tompon'andraikitra ambony momba ny fizahantany, mankany amin'ireo tsena loharano lehibe indrindra ary koa ny fidiranay amin'ny tsena tsy mahazatra any Afovoany Atsinanana, izay nitadiavanay ny hampiroborobo ny fahatongavana sy mampirisika ny fampiasam-bola bebe kokoa amin'ny sehatry ny fizahantany.
Etazonia & Canada Markets Blitz
Nanomboka ny blitz izahay tamin'ny alàlan'ny andiana fivoriana niaraka tamin'ireo mpitarika ny indostrian'ny dia, ny media ary ny mpandray anjara hafa amin'ny tsena loharano roa lehibe indrindra, Etazonia sy Kanada. Faly aho mizara fa tena nahavokatra ny fiarahanay tamin'ireo mpiara-miombon'antoka ara-pizahantany amin'ireo tsena roa ireo.
Nisy ny ahiahy mifandraika amin'ny COVID-19 ary tianay ny hanome toky ny tombontsoan'ny fizahantany fa mijanona ho toerana azo antoka i Jamaika.
Ny protocols dia napetraka mba hahazoana antoka fa afaka tonga any amin'ny nosy ny mpitsidika, mandeha any amin'ny toerana mahasarika anay ary manana traikefa Jamaikana tena izy am-pilaminana sy tsy misy olana. Na dia eo aza ireo ahiahy ireo, ny fahatokisana an'i Jamaika dia mbola matanjaka be.
Nanome toky anay ireo mpanatanteraka ny zotram-piaramanidina lehibe indrindra eran-tany, American Airlines, fa amin'ny volana Desambra dia hahita sidina tsy an-kiato 17 isan'andro ny nosy, satria mitombo ny fitakiana ny toerana haleha.
Nasongadin'izy ireo ihany koa fa i Jamaika no nisongona an'i Karaiba teo amin'ireo mpanjifa tamin'ny sehatra midadasika American Airlines Vacations ary nanamafy fa hampiasa ny fiaramanidina Boeing 787 vaovao, lehibe sy midadasika izy ireo, amin'ny lalana manan-danja maro mankany Jamaika manomboka ny volana Novambra.
Southwest Airlines, iray amin'ireo zotram-piaramanidina lehibe indrindra any Etazonia ary zotram-piaramanidina lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, dia nanome toky ny delegasioninay fa ny sidina mankany Montego Bay amin'ny volana ho avy dia tena manakaiky ny haavon'ny firaketana mialoha ny areti-mifindra amin'ny taona 2019, izay midika fa mitombo ny fangatahana. ho an'i Jamaika ho an'ny mpandeha amerikana.
Southwest dia miasa tsy an-kijanona eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena amerikana lehibe ao Houston (Hobby), Fort Lauderdale, Baltimore, Washington, Orlando, Chicago (Midway), St. Louis ary Montego Bay.
Expedia Inc., masoivoho fitsangatsanganana an-tserasera lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ary mpamokatra orinasam-pizahantany lehibe indrindra ho an'i Jamaika, dia nilaza fa ny angon-dry zareo dia mampiseho mazava tsara ny haavon'ny efitranon'ny efitrano sy ny fitomboan'ny mpandeha miaraka amin'ireo metrika izay mihoatra ny fotoana mitovy amin'ny taona 2019. Nomarihin'izy ireo ihany koa fa mbola mijanona i Etazonia. ny tsenan'ny fikarohana voalohany indrindra ho an'i Jamaika.
Ny tsenantsika loharano faharoa lehibe indrindra, Canada, dia hanatitra sidina tsy an-kiato 50 isan-kerinandro mankany amin'ilay nosy. Ny sidina, izay nanomboka ny 1 Novambra, dia hotanterahin'ny Air Canada, WestJet, Sunwing, Swoop ary Transat miaraka amin'ny serivisy mivantana avy any amin'ny tanànan'i Toronto, Montréal, Calgary, Winnipeg, Hamilton, Halifax, Edmonton, St. John's, Ottawa, ary Moncton.
Manodidina ny 65% ​​amin'ny ambaratonga 2019 ny famandrihana mialoha ary eo amin'ny 82% amin'ny haavon'ny ririnina amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina dia eo amin'ny 2019% amin'ny ambaratonga 260,000 miaraka amin'ny seza 19 eo ho eo no mihidy. nakatona nandritra ny volana maromaro ny dia iraisam-pirenena.
Raha ny Royal Caribbean International, ny zotra sambo faharoa lehibe indrindra eran-tany, dia niverina niasa tany Jamaika tamin'ny Novambra tamin'ity taona ity. Ary koa, nanamafy ny faniriana mafy hampiasa Jamaikana an'arivony manerana ny asa isan-karazany ny mpanatanteraka sambo ary miandry ny fanitsiana ny lalànan'ny governemanta mba hahatanteraka izany.
Blitz tsena Afovoany Atsinanana
Ny fampiasam-bola dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny fanarenana ny fizahantany amin'ny alalan'ny fanomezana ny vola ilaina amin'ny fanamboarana sy fanatsarana ireo tetikasa tena ilaina amin'ny fampivoarana sy ny fitomboan'ny fahafahan'ny fizahantany.
Ny fitsidihanay tany Afovoany Atsinanana dia nahafahanay nijery ny fahafahan'ny FDI amin'ny sehatry ny fizahantany ary koa nanorina ny fifanakalozan-kevitra natomboka tamin'ny volana Jona niaraka tamin'ny Minisitry ny Fizahantany ho an'i Arabia Saodita, Andriamatoa Ahmed Al Khateeb, mikendry ny hanamora ny fiaraha-miasa sy ny fampiasam-bola amin'ny fizahantany ary faritra manan-danja hafa.
Tany Emirà Arabo Mitambatra (UAE) no nijanonanay voalohany tamin'ny Dubai World Expo 2020. Nasehon'i Jamaika ny tranoheva tsara tarehy iray mampiseho ireo vokatra farany sy fanavaozana farany amin'ny lohahevitra hoe: “Mampihetsi-po azy i Jamaica.” Ny trano heva dia manana faritra fito, izay ahafahan'ny mpitsidika miaina ny fomba fijery, ny feo ary ny tsiron'i Jamaika, ary mijery ny fomba fihetsehan'ny firenentsika izao tontolo izao ary miasa ho toy ny fifandraisana ara-pitaovana.
Faly aho mizara fa ny tranohevantsika mambabo dia nomena anarana ho iray amin'ireo 'mangatsiaka indrindra' tamin'ny World Expo 2020 nataon'ny sampana ITP Media Group, Time Out Dubai.
Ny fitsangatsanganana tany Dubai dia nanome anay fahafahana hanaraka ny fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ireo mpanatanteraka avy amin'ny TUI, iray amin'ireo mpandraharaha sy mpiara-miombon'antoka lehibe indrindra aminay amin'ny fizarana fizarana ny indostrian'ny fizahantany.
Ny TUI dia nanamafy ny fanohizana ny sidina sy ny fitsangantsanganana ho any Jamaika, miaraka amin'ny hetsika fitsangantsanganana nokasaina hanomboka amin'ny Janoary 2022. Ny orinasa dia nanoritra manokana ny drafitra hodiana hody ao Montego Bay sy ny fampidirana ny antso ho any Port Royal amin'ny fandaharam-potoan'izy ireo. Manantena izahay fa hisy antso dimy manomboka amin'ny Janoary ka hatramin'ny Aprily 2022 ao Port Royal. Nandritra ny dinika nifanaovana tamin'ny TUI dia nanoro hevitra ireo tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa fa ny angon-drakitr'izy ireo dia mampiseho fa ambony ny fangatahana sambo, ary nahavita nitazona ny famandrihana nofoanana. Nizara ihany koa izy ireo fa ho 79,000 ny fahafahan'ny rivotra amin'ity vanim-potoana ririnina ity, izay latsaky ny 9% raha oharina amin'ny tarehim-ririnina talohan'ny COVID.
Raha tany Dubai izahay, dia namarana andiana fivoriana fampiasam-bola manan-danja amin'ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny DP World, iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra amin'ny seranan-tsambo sy lozisialy an-dranomasina, miorina ao UAE. Nandritra ny fivoriana telo andro nifanesy dia nifanakalo hevitra momba ny fampiasam-bola tao amin'ny Port Royal Cruise Port sy ny mety hisian'ny homeporting izahay. Niresaka momba ny fampivoarana foibe ara-pitaovana, fitaterana mody maro Vernamfield ary aerotropolis ary koa ny fampiasam-bola ara-drafitra hafa.
Ny DP World dia manam-pahaizana manokana amin'ny logistika entana, serivisy an-dranomasina, fampandehanana seranan-tsambo ary faritra ara-barotra malalaka. Izy io dia mitantana kaontenera 70 tapitrisa eo ho eo izay entin'ny sambo 70,000 eo ho eo isan-taona, izay mitovy amin'ny 10% eo ho eo amin'ny fifamoivoizana eran-tany kaontin'ny seranan-tsambo 82 an-dranomasina sy an-tanety any amin'ny firenena 40 mahery.
Nanomboka fifanakalozan-kevitra tamin'ny solontenan'ny Emirates Airlines izahay, mba hampidirana serivisy manokana eo anelanelan'i Dubai sy Jamaika, ho fankalazana ny Andron'i Jamaika ao amin'ny Expo 2020, Dubai tamin'ny Febroary 2022. Emirates no zotram-piaramanidina lehibe indrindra any Emirà Arabo Mitambatra, ary ny Afovoany Atsinanana amin'ny ankapobeny, miasa. sidina mihoatra ny 3,600 isan-kerinandro.
Ho fanampin'izay, manantena ny fifanakalozan-dresaka bebe kokoa amin'ny tontolon'ny paikady ho an'ny toerana maro amboarina any amin'ny faritra avaratr'i Karaiba izahay mba hahafahan'ny Emirates mandray anjara feno kokoa sy ireo mpiara-miombon'antoka hafa any Afovoany Atsinanana.
Nihaona tamin'ny Manampahefana ara-pizahantany Emirà Arabo Mitambatra ihany koa izahay mba hiresaka momba ny fiaraha-miasa amin'ny fampiasam-bola ara-pizahantany avy any amin'ny faritra, ny hetsika fizahan-tany any Afovoany Atsinanana, ary ny fidirana amin'ny vavahadin'i Afrika Avaratra sy Azia ary ny fanamorana ny fiaramanidina.
Fanampin'izany, nisy ny fihaonana niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny EMAAR, izay azo inoana fa ilay lehibe indrindra sy malaza indrindra amin'ny fampiantranoana trano sy trano / vondrom-piarahamonina any Afovoany Atsinanana; DNATA, mpandraharaha fitsangatsanganana tokana lehibe indrindra any UAE ary TRACT, mpandraharaha fitsangatsanganana matanjaka any India.
Nifarana tamin'ny fomba tsara ny dianay tany UAE. Notanterahina tany Dubai ny fandaharana amin'ity taona ity ho an'ny World Travel Awards, ary i Jamaika dia nanohy ny fanjakazany tamin'ny fiatrehana ny “Toeran'ny Fizahan-tany Karibia” sy ny “Toerana fitsangantsanganana an'i Karaiba”, raha ny Birao Mpitsidika Jamaika kosa no nomena anarana hoe “Filankevi-pitantanan'i Karaiba.'
Nandresy ihany koa izahay tamin'ny sokajy roa vaovao: 'Toeran'ny fizahantany fizahan-tany malaza any Karaiba' sy 'Toerana momba ny zavaboahary any Karaiba.' Mpilalao maromaro amin'ny indostrian'ny fizahantany any an-toerana ihany koa no nivoaka ho mpandresy lehibe.
Avy any Emirà Arabo Mitambatra, nankany Riyadh, Arabia Saodita izahay, izay nifanakalozan-kevitra tamin'ireo mpanatanteraka avy amin'ny Saudia Airlines. Faly aho mizara fa ao anaty lamasinina ny drafitra hanamafisana ny fifandraisan'ny rivotra eo amin'ny Afovoany Atsinanana sy Karaiba.
Ny paikady midadasika kokoa dia ny hahatonga an'i Jamaika ho ivon'ny fifandraisana avy any Afovoany Atsinanana ka hatrany Karaiba, Amerika Afovoany, Amerika Atsimo ary faritra any Amerika Avaratra. Izany dia hametraka an'i Jamaika ho ivon'ny fifandraisan'ny rivotra eo amin'ny Atsinanana sy Andrefana.
Tena matoky izahay fa hahita vokatra avy amin'izany ao anatin'ny fotoana fohy izahay satria samy naneho faniriana mafy ho an'i Karaiba ny zotram-piaramanidina noresahintsika ary, indrindra, Amerika Latina.
Ny fihodinan'ny hetsika ara-barotra miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka lehibe amin'ny fizahantany sy ny lozisialy any Afovoany Atsinanana dia tena namokatra ary tsy isalasalana fa hiteraka fampiasam-bola sy tsena vaovao ary fanokafana vavahady lehibe.
Ny fidiranay amin'ny tsena loharano fahatelo lehibe indrindra, ny United Kingdom (UK), mba hanamafisana ny fahatongavana dia hita fa namokatra mitovy ary namarana ny tsenantsika eran-tany.
Nitarika ekipa avo lenta avy amin'ny Ministeran'ny Fizahantany sy ny Jamaika Tourist Board (JTB) aho ho any amin'ny World Travel Market, iray amin'ireo seho ara-barotra iraisam-pirenena lehibe indrindra eran-tany, izay natao tany Londres ny 1 ka hatramin'ny 3 Novambra.
Nanana fiaraha-miasa tsara tamin'ireo mpiara-miombon'antoka manan-danja aminay any UK izahay ary nanome toky azy ireo ny fahavononan'i Jamaika ho azy ireo sy ny fiarovana anay ho toerana haleha, miaraka amin'ny tahan'ny otrikaretina COVID-19 latsaky ny iray isan-jato ao amin'ny Corridors Resilient.
Raha tao amin'ny World Travel Market izahay dia nihaona tamin'ireo mpanatanteraka ambony ao amin'ny Amadeus, orinasa teknolojia fitsangatsanganana maneran-tany miorina eoropeanina, izay nampahafantatra anay fa ny famoahana ny sarimihetsika James Bond farany indrindra amin'ny 30 septambra, No Time to Die, izay misy sary maromaro voatifitra. Jamaika, dia manampy amin'ny fitarihana ny fahalianana amin'ny tanjona Jamaika, indrindra any Royaume-Uni.
Jamaika no trano ara-panahin'i Bond, miaraka amin'i Ian Fleming nanoratra ny tantara nosoratan'i Bond tao an-tranony, “Goldeneye.” Nalaina sary teto ihany koa ny sarimihetsika Bond Dr. No sy Live ary Let Die. For No Time to Die, nanorina trano tora-pasika fisotroan-drononon'i Bond tao San San Beach ao Port Antonio ireo mpamokatra sarimihetsika.
Ny seho hafa nalaina sary tany Jamaika dia ahitana ny fiarahany tamin'i Felix namany sy ny fihaonany tamin'ilay 007 vaovao, Nomi. Jamaika koa dia nitombo avo roa heny ho an'ny sehatra ivelany any Kiobà.
Fanampin'izany, nanamarika ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Amadeus fa mahita fikatsahana sy famandrihana avo lenta ary fitakiana ho an'i Jamaika any Royaume-Uni izy ireo ary nilaza izany fa ny asan'ny Minisiteran'ny Fizahantany sy ny sampan-draharaham-panjakana ao amin'ny Jamaica Tourist Board (JTB) miaraka amin'ny fanalahidy. mpiara-miombon'antoka amin'ny tsena.
Amin'ny faran'ity volana ity dia hanomboka handray sidina 17 farafahakeliny isan-kerinandro avy any Royaume-Uni isika, hamerina ny nosy ho eo amin'ny 100 isan-jato eo ho eo ny fahafahan'ny zotram-piaramanidina rehefa mitombo ny isan'ny fizahantany.
TUI, British Airways ary Virgin Atlantic no zotram-piaramanidina telo mitondra mpandeha eo anelanelan'i UK sy Jamaika miaraka amin'ny TUI miasa sidina enina isan-kerinandro, Virgin Atlantic hitombo ho sidina dimy isan-kerinandro ary British Airways miasa dimy isan-kerinandro. Ny sidina dia miala ao London Heathrow, London Gatwick, Manchester ary Birmingham. Ankoatra izany, dia mety hahita fiovana bebe kokoa amin'ny fandaharam-potoana isika rehefa manohy ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo mpiara-miombon'antoka amintsika ny ekipantsika.
Raha ny vaovao avy amin'ny tsenantsika eoropeana, dia nanao ny sidina voalohany avy any Frankfurt, Alemaina, ho any Montego Bay ny Eurowings fahatelo lehibe indrindra Eoropeana, nitondra mpandeha sy mpiasa 4.
Tena tsena matanjaka ho antsika i Alemaina, misy mpitsidika 23,000 avy amin'ity firenena ity tonga eto amin'ny morontsiraka amin'ny taona 2019 talohan'ny areti-mifindra. Ity sidina avy any Alemaina ity dia hanampy amin'ny iraka ataonay hampitomboana ny fahatongavan'ireo mpitsidika avy any Eoropa, izay nandraisan'ny ekipako anjara mavitrika.
Ny serivisy vaovao dia manidina indroa isan-kerinandro mankany Montego Bay, miainga ny alarobia sy ny asabotsy, ary manatsara ny fidirana amin'ny nosy avy any Eoropa. Fanampin'izay, nanomboka sidina vaovao indray mandeha isan-kerinandro ho any Jamaika ny orinasam-pitaterana fialam-boly Soisa, Edelweiss, raha ny Condor Airlines kosa dia namerina sidina teo ho eo isan-kerinandro teo anelanelan'i Frankfurt, Alemana ary Montego Bay tamin'ny Jolay.
Tsy isalasalana fa ny fizahan-tany no fitempon'ny toe-karena Jamaikana ary ny fanamafisam-peo ahafahantsika miverina haingana. Ireo tombony azo tsapain-tanana azonay amin'ny fizahan-tany dia azo antoka fa hiverina ho tombontsoan'ny rehetra voakasik'izany – ny vahoaka Jamaikana, ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahantany ary ny mpitsidika anay.